Sarkaal ka tirsanaa Hey’adda Nabadsugida oo xalay lagu dilay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Sarkaal ka tirsan Hey’adda Nabadsugida ayaa xalay lagu dilay magaalada Muqdisho, iyadoo kooxihii dilka geystay ay baxsadeen.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga C/kaamil Macalin Shugri ayaa xaqiijiyay dilka Sarkaalka ka tirsanaa NISA, ayna ciidamada ammaanka wadaan baaritaano.
“Xalay fiidkii ayaa degmada Waabari waxaa lagu dilay G/dhexe C/casiis Caraaye oo ka tirsanaa Saraakiisha Nabadsugida”ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga.
Waxaa uu sheegay in lagu raad-joogo kooxihii dilka ka dambeeyay, ciidamada ammaankana ay wadaan howl gallo.
Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dilalka loo geysanayay shaqaalaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada.
Qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Mandhera ee Gobolka waqooyi bari Kenya